Apple TV + wuxuu imaan doonaa 1da Nofeembar qiimaha $ 4,99 bishiiba | Wararka IPhone
Apple TV + wuxuu imaan doonaa 1da Nofeembar qiimaha $ 4,99 bishiiba
Ka dib markii uu ku dhawaaqay imaatinka Apple Arcade, Tim Cook wuxuu ku dhawaaqay imaatinka fiidiyowga ku saabsan adeegga dalabka oo leh asalka asalka ah ee Big Apple, the Apple TV +. Adeegga rukunka ayaa imaan doona 1 bisha November in ka badan 100 dal oo adduunka ah. Qiimaha adeeggu waa 4,99 Dollar laakiin sheeko cusub: haddii aan soo iibsanno qalab cusub waan haysan doonnaa rukumo bilaash ah hal sano Dhinaca kale, Tim Cook wuxuu qaatay fursad uu ku muujiyo trailer-kii ugu horreeyay ee rasmi ah ee taxane kale oo lagu soo dari doono adeegga: Eeg, jilaaga uu yahay Jason Momoa.
Apple TV + ayaa yimid 1-dii Nofeembar
Ugu dambeyntiina waxaan ognahay taariikhda imaatinka mid ka mid ah fiidiyowyada aadka loo filayo ee ku saabsan adeegyada dalabka ee sanadkii hore: Apple TV +. Tim Cook iyo kooxdiisu waxay ku dhawaaqeen inay gaari doonaan in ka badan 100 waddan marka la gaaro 1 bisha November qiimo leh $ 4,99, la jaanqaadi kara rukunka qoyska ee si aad ah kor loogu qaaday. Dhinaca kale, waxaa la tuuray bamboo aan in badan oo naga mid ahi fileynin. Taasina waa haddii aad iibsato qalab cusub waxaad heli doontaa hal sano oo lacag la'aan ah taas oo aan ku raaxeysan karno dhammaan waxyaabaha asalka ah ee adeegga ku jira.
Waxaan sidoo kale ogaanay wararka taxanaha cusub ee lagu soo dari doono adeeggan: Eeg, Waxaa agaasimay agaasimaha "Ciyaaraha Gaajada" waxaana abuuray hal abuure Peaky Blinders. Waxaa jilaya Jason Momoa, taxanahan oo ku saleysan adduun ay dadka deggan oo dhan ka lumeen aragtidii aragga isla markaana ay soo heleen habab cusub oo ay ku ugaadhsadaan, ku noolaadaan una noolaadaan. Si kastaba ha noqotee, wax waliba way isbadalaan markii shaqsigii wax arki kara uu dhasho.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » Apple TV + wuxuu imaan doonaa 1da Nofeembar qiimaha $ 4,99 bishiiba
Jiilka seddexaad ee AirPods ma geli doono wax soo saar illaa Oktoobar